रोचक – Kavreonline
नेपालकै पहिलो डोजर चलाउने साहसी महिला, ‘चप्पल किन्न पैसा थिएन, नाङ्गै खुट्टा काम खोजेँ’ (भिडियो)
मुना घिमिरे श्रेष्ठ नेपालको पहिलो हेभी इक्विपमेन्ट चालक हुन्। गोरखामा जन्मेकी उनका दाजुभाइ थिएनन्। पढाइमा अब्बल भए पनि उनले नौ कक्षा पढ्दापढ्दै पढाइ छाडिन्। ‘छोरा नभएको घर भनेर मान्छेहरू कुरा काट्थे,’ उनले भनिन्, ‘१५ वर्षको उमेरमा पढाइ…
यस्ताे अचम्मकाे घोडा जो मानिस जस्तै मर्निङ वाकमा निस्कन्छ
स्वस्थ र स्फुर्त रहन मानिसहरु बिहान मर्निङ्ग वाकमा निस्किने गर्छन् । तर जनावर पनि मर्निङ्ग वाकमा निस्किछन् भन्दा अचम्म लाग्न सक्दछ । जर्मनका एक घोडा १४ वर्षदेखि हरेक बिहान मर्निङ्ग वाकमा जाने गरेका छन् । जर्मनीको फ्रान्कफर्टमा विगत १४…
२५ वर्षअघिसम्म जनकपुरमा टोलैपिच्छे मन्दिर र कुटी भेटिन्थे । यतिबेला ती मन्दिर र कुटी छैनन् । मन्दिर र कुटी त हराए–हराए, भगवान्का मूर्ति पनि गायब भए । अहिले बाँकी छन् त केही मन्दिरका भग्नावशेष मात्र ।पछिल्लो दुई दशकमा जनकपुरमा ४० भन्दा बढी…
यस्तो पनि विवाह– २ सय हेलिकप्टर र सय जना पण्डित बुक, ४०० प्रकारको खाना !
भारतको उत्तराखण्डमा एक यस्तो राजकीय विवाह हुनेभएको छ जसबारे थाहा पाउनुभयो भने तपाई आश्चर्यमा पर्नुहुन्छ । यो विवाहका लागि २ सय हेलिकोप्टर र १०० जना पण्डित बुक गरिएको छ । विवाहको लागि बनाइएको निमन्त्रणा कार्डपनि अनौठो खालको छ । यसमा…
अचम्म को गाउ जहाँ ११ महिना पानीमुनि हुन्छ, एक महिना मात्र देखा पर्छ
भारतको पश्चिमी राज्य गोवामा रहेको एउटा गाउँ प्रत्येक वर्ष एक महिना मात्र देखा पर्छ, बाँकी समय पानीमा डुब्छ। एक महिनाको अवधिमा सो स्थानबाट बसाइँ सरेका स्थानीय बासिन्दा जम्मा हुन्छन् र आफ्नो पुरानो थातथलोमा रमाउँछन्। सुप्रिया वोहराको रिपोर्ट।…
कुन बार जन्मिएको मानिसको भविष्य र आचरण कस्तो हुन्छ ? जानौ
एजेन्सी । मानिसको जन्मेको समय र उसको वातावरणले उसको भविष्य निर्धारण गर्ने गर्दछ । कुन बालक कुन बार र समयमा जन्मेका हुन्, उनीहरुको उक्त साइतले स्वाभाव र चरित्र निर्धारण गर्ने ज्योतिषहरुले बताउने गरेका छन् । त्यसैले कुन बार जन्मेका मानिसहरु…
भुलेर पनि यस्तो काम गरे ठहरिनेछ महा–पाप, जो कहिल्यै क्षमा मिल्दैन र जीवनभर सुख प्राप्ति हुदैन
सबै मासिसले धर्म गर्नुपर्छ पाप गर्नुहुदैन भन्छन तर धर्म भनेको के हो र पाप भनेको के हो थाहा पाउ‘दैनन् । मन्दिरमा गएर निर्जीव मूर्तिलाई फूलपाती अक्षता भेटी चढाई ढोग दिनुलाई धर्म भन्छन् भने मन्दिरमा पूजा नगर्नुलाई पाप भन्छन् । प्रत्यक्ष…
झुटो बोल्ने मानिस अवश्य नरक पुग्छन् !
हिन्दूहरुको पवित्र धर्मग्रन्थ मानिएको गरुड पुराणमा नरकका बारेमा सविस्तार व्याख्या गरिएको छ । पाप गरेका मानिस नरक जाने धार्मिक विश्वासम हिन्दू धर्मावलम्बीहरुमा रहँदै आएको छ । गरुड पुराणका अनुसार, फरक किसिमका पापलाई फरक किसिमका नरक प्राप्त…
के तपाईलाई पैसाको हाहाकार भैरहेको छ ? पर्समा राख्न नबिर्सनुहोस् यी ७ बस्तु
वास्तु शास्त्रका अनुसार पर्समा पैसाको अभाव नहोस् भन्नका लागि यसमा पनि सकारात्मक उर्जा पैदा गर्नुपर्छ । तपाइँले पर्समा राख्ने कुराले यसमा पैसाको प्रयाप्तता र अभावको वातावरण बन्ने पैदा हुने वास्तु शास्त्रको भनाइ छ । यहाँ वास्तु शास्त्रका…